Vaovao - Fampiharana ny WMS amin'ny indostrian'ny fanafody
Fampiharana ny WMS amin'ny indostrian'ny fanafody
Warehouse Management System (WMS), nohafohezina ho WMS, dia rindrambaiko iray mitantana toerana fitahirizana fitaovana. Tsy mitovy amin'ny fitantanana lisitra izany. Amin'ny lafiny roa no tena fiasan'izy io. Ny iray dia ny fametrahana rafitra toerana fitahirizana sasany ao amin'ny rafitra hifehy ireo fitaovana. Ny fametrahana ny toerana manokana spatial dia ny fitarihana ny fizotry ny fampitaovana ny fitaovana miditra, mivoaka ary ny trano fanatobiana entana amin'ny alàlan'ny fametrahana paikady sasany ao amin'ny rafitra.
Ny rafitra dia mifehy tsara sy manara-maso ny fizotran'ny lozisialy sy ny fitantanana ny vidin'ny orinasa fitahirizana entana, mahatsapa ny fitantanana ny fampahalalam-baovao momba ny fitehirizana trano, ary manamora ny fampiasana ireo loharanon-karena.
Ny rojom-pivarotana lozisialy isaky ny indostria dia manana ny mampiavaka azy. Ny WMS dia tsy vitan'ny famahana ny olana iraisan'ny lozisialy, fa koa mahafeno ny filan'ny indostria samihafa.
Inona avy ireo toetra mampiavaka ny fampiharana ny WMS amin'ny indostrian'ny fanafody?
Ny indostrian'ny fanafody dia azo zaraina amin'ny indostrian'ny pharmaceutika sy ny indostrian'ny fizarana fanafody. Ny voalohany dia mifototra amin'ny tsindrona, takelaka, kapsula sns, ary ampiharina amin'ny fomba fandidiana mandeha ho azy, fikirakirana, fitehirizana ary fitehirizana; ity farany dia mandrakotra ny fitsaboana tandrefana, ny fitsaboana nentim-paharazana sinoa, ary ny fitaovana fitsaboana, miaraka amin'ny tanjona hampihenana ny lisitra ary ny fifanakalozana haingana sy mahomby.
Ny WMS dia tsy maintsy mampihatra sy miantoka ny fanaraha-maso henjana sy ny fanarahan-dia ny isan'ny andramena amin'ny hetsika rehetra eo amin'ny sehatry ny fitsaboana. Amin'ity dingana ity dia tsy maintsy miantoka ny fifehezana ny kalitaon'ny zava-mahadomelina koa izy. Mandritra izany fotoana izany dia tsy maintsy ampifandraisina amin'ny rafitra kaody fanaraha-maso elektronika amin'ny fotoana tena izy. Ny rohy mivezivezy tsirairay avy dia mahatsapa ny fahazoana ny kaody mifehy ny zava-mahadomelina, ny fangatahana fampahalalana momba ny kaody mifehy ny zava-mahadomelina ary ny fampakaram-baovao mombamomba ny fitsipiky ny zava-mahadomelina hahafeno ny fepetra takian'ny fanarahana lalana roa lalana.